सहायता | Bookshare Nepal
विषयहरू - Any -सदस्य – खाता सम्बन्धी प्रश्नहरूसदस्य – पुस्तकहरू डाउनलोड गर्ने र पढ्नेसदस्य – पुस्तकहरू फेला पार्नेसदस्य – सुरुवात गर्ने
सहायता मैले मेरो पासवर्ड भुलें। नयाँ पासवर्ड कसरी पाउनु?
तपाईंको पासवर्ड रिसेट गर्न यहाँ जानुहोस्: पासवर्ड भुलें र तपाईंको इमेल ठेगाना हाल्नुहोस्। तपाईंलाई इमेलमा नयाँ पासवर्ड बनाउने लिङ्क पठाइनेछ।
सम्पूर्ण सहायता लेख हेर्नुहोस्
सहायता के म एपल बूक्स मा पुस्तक पढ्न सक्छु?
प्रयोगकर्ताहरूले हाम्रो EPUB फर्म्याटलाई iBooks को प्रयोग गरेर उनीहरूको एपल कम्प्युटर तथा iOS मोबाइल यन्त्रहरू (जस्तै iPhone) मा पढ्न सक्छन्।
तपाईंको खातामा लगइन गर्नुहोस्।
पृष्ठको माथिल्लो भागमा रहेको खोजी बाकसबाट पुस्तक खोज्नुहोस्।
खोजी परिणामहरूमा कुनै पुस्तक फेला पारेपछि, डाउनलोड फर्म्याट ड्रप-डाउन मेन्युबाट EPUB चयन गर्नुहोस्, र डाउनलोड बटन चयन गर्नुहोस्।
पुस्तकको प्याकेजिङ पूरा भएपछि तयारी फाइल डाउनलोड गर्ने विकल्प चयन गर्नुहोस्।
एपल बूक्स बटनमा खोल्ने विकल्प चयन गर्नुहोस्।
सहायता मैले डाउनलोड गरेको पुस्तक कहाँ छ?
प्रत्येक वेब ब्राउजर तथा सफ्टवेर प्रोग्रामले तपाईंको पुस्तकहरूलाई अलग अलग स्थानहरूमा बचत गर्न सक्छ। विन्डोज कम्प्युटरहरूका लागि, पहिला तपाईंको डाउनलोड फोल्डर वा तपाईंको डक्युमेन्ट्स फोल्डरमा हेर्नुहोस्।
यदि तपाईंले फाइल यहाँ पाउनु भएन भने, तपाईंले डाउनलोड गरेको पुस्तक तपाईंको कम्प्युटरमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। फाइलको नाममा पुस्तकको नामको पहिलो केही शब्दहरू हुनेछ र स्पेसको ठाउँमा अन्डरस्कोर दिएको हुनेछ।
तपाईंले स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेर विन्डोज कम्प्युटरमा खोजी चयन गरेर आफ्नो कम्प्युटरमा खोज्न सक्नुहुन्छ (वा म्याक मा कन्ट्रोल र शिफ्ट थिचेर)। यदि अझैपनि तपाईंले पुस्तक फेला पार्न सक्नु भएन भने, तपाईंले ग्राहक सेवामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वा पुनः पुस्तक डाउनलोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ।
सहायता मैले BRF कसरी डाउनलोड गर्नु?
कुनै कम्प्युटर वा ब्रेल नोट-टेकरको प्रयोग गरेर BRF फाइल डाउनलोड गर्न, कृपया तलको चरणहरू पूरा गर्नुहोस्। कृपया याद राख्नुहोस् ट्याबलेट वा स्मार्टफोनमा BRF फाइलहरू डाउनलोड गर्दा उक्त चरणहरू काम लाग्दैन।
तपाईंको खातामा लग गर्नुहोस्
सर्च बक्सको प्रयोग गरेर कुनै पुस्तक खोज्नुहोस्
पुस्तकको नाम चयन गर्नुहोस्
डाउनलोड फर्म्याट ड्रप डाउन (कम्बो) बक्सबाट BRF चयन गर्नुहोस्, त्यसपछि डाउनलोड बटनमा थिच्नुहोस्
यदि फाइल खोल्ने वा बचत गर्ने भनेर सोधेमा, कृपया तपाईंले बचत गर्नुहोस् लाई रोज्नुहोस्, त्यसपछि आफूले सजहै भेटाउन सक्ने स्थान चयन गर्नुहोस्
नोट: धेरैजसो वेब ब्राउजरहरूले पूर्वनिर्धारित तवरमा फाइलहरू डाउनलोड फोल्डरमा बचत गर्छ।
सहायता सदस्यता: सुरुवात गर्ने
पुस्तक फेला पार्नुहोस्
पुस्तकालयका लागि गृहपृष्ठको माथिल्लो भागमा रहेको सर्च बक्समा जानुहोस्। सर्च बक्समा पुस्तकको नाम, लेखक, वा कुनै मुख्यशब्दबाट एउटा शब्द वा वाक्यांश टाइप गर्नुहोस्। हाम्रो शक्तिशाली सर्च इन्जिनले पुस्तकालयमा भएको सम्पूर्ण पुस्तकहरूको नाम, लेखकको नाम, तथा सामाग्रीहरू जाँच गर्नेछ।
पुस्तक डाउनलोड गर्नुहोस्
तपाईंले चाहेको पुस्तक फेला पारेपछि, तपाईं यसलाई डाउनलोड गर्न र पढ्न तयार हुनुहुन्छ!
हाम्रो पुस्तकहरू पढ्ने सबभन्दा लोकप्रिय तरिकाहरू: अडियो मात्र, रिफ्रेसेबल ब्रेल यन्त्रमा ब्रेलमा, वा सिङ्क्रोनाइज्ड अडियोका साथ शब्दहरूलाई हाइलाईट गरेर।
अडियो, अन्धो मानिसहरूले, वा पाठ संस्करण हेर्न असम्भव हुने स्थितिहरूमा प्रयोग गर्ने।
अडियो तथा पाठ हाइलाईट गर्ने, खास गरि डिस्लेक्जिया वा आँखाका समस्याहरू जस्ता सिकाइ भिन्नताहरू हुने मानिसहरूका लागि उपयोगी
ब्रेल, जस्तै रिफ्रेसेबल ब्रेल यन्त्रमा, वा माथि उठेको अक्षरमा।
सहायता मैले कुनै पुस्तकको अडियो संस्करण कसरी पाउन सक्छु?
पुस्तकहरू सुन्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। कुनै पुस्तक कसरी पढ्ने भनेर जान्न तपाईंले पहिला रिडिङ टूल्स पृष्ठमा हेर्न पनि सक्नुहुन्छ।
iOS वा एन्ड्रोइड एपहरू
यदि तपाईं पुस्तकको पाठलाई स्वर दिने कुनै रिडिङ टूल, जस्तै डल्फिनको इजिरिडर, प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईंले पुस्तक फेला पारेर यसलाई खोलेर रिडिङ टूलमा सोझै सुन्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंलाई एपल बूक्सको प्रयोगद्वारा पढ्ने बानी छ भने, पुस्तकलाई EPUB मा डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई एपल बूक्समा खोल्नुहोस्, जसले जोड्ले पढ्ने काम गर्छ।
माइक्रोसफ्ट वर्ड वा एज ब्राउजर:
यदि तपाईं वर्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, पुस्तकलाई DOCX मा डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई वर्डमा खोल्नुहोस्, जसमा जोड्ले पढेर सुनाउने इमर्सिभ रिडर विकल्प उपलब्ध छ।
यदि तपाईं एज ब्राउजर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, पुस्तकलाई EPUB मा डाउनलोड गर्नुहोस् र यसलाई आफ्नो ब्राउजरमा खोल्नुहोस्, जसमा जोड्ले पढेर सुनाउने इमर्सिभ रिडर विकल्प उपलब्ध छ।
अडियो प्लेयर (DAISY अडियो वा MP3)
यदि तपाईंसँग DAISY अडियो वा MP3 फाइल आवश्यक पर्ने प्लेयर छ भने, तपाईंले पुस्तकलाई यो वेबसाइटमा अडियो फाइलका रूपमा फेला पारेर डाउनलोड गर्नु पर्नेछ। त्यसपछि तपाईंले फाइललाई प्लेयरमा लगेर यसलाई खोलेर प्ले गर्दै सुन्नु पर्नेछ।
अडियोमा उपलब्ध हुने धेरैजसो पुस्तकहरू “टेक्स्ट-टू-स्पिच” (TTS) इन्जिनद्वारा उत्पादन गरिएका हुन्छन् जसले कम्प्युटरकृत स्वरहरूको प्रयोग गर्छ। यो TTS इन्जिनले हाल अङ्ग्रेजी तथा स्प्यानिश-भाषाका पुस्तकहरू मात्र तयार गर्न सक्छ, तर पछि धेरै भाषाहरूमा आउनेछ।
बढी TTS भाषाहरूका अतिरिक्त, भविष्यमा पुस्तकालयमा मानव-वाचित पुस्तकहरू पनि थप गरिने छ।
सहायता म एउटा पुस्तक डाउनलोड गर्दैछु; DAISY तथा BRF फाइल फर्म्याटहरू के हुन्?
DAISY तथा BRF भनेको पहुँचयोग्य सामाग्रीहरूको डिजिटल फर्म्याट हो (DAISY भन्नाले डिजिटल पहुँचयोग्य सूचना प्रणाली, तथा BRF को पूरा अर्थ ब्रेल रेडी फर्म्याट हो)।
DAISY मा फर्म्याट गरिएको पुस्तकहरूलाई अडियो मात्रका रूपमा वा अडियोमा पढेर सँगै शब्दहरूलाई हाइलाईट गर्न पनि सकिन्छ। यदि तपाईंले अडियो मात्र चाहेमा, तपाईंले हाम्रो DAISY अडियो डाउनलोड फर्म्याट रोज्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं पुस्तक सुन्न चाहनुहुन्छ र शब्दहरू स्क्रिनमा हाइलाईट गर्न चाहनुहुन्छ भने, हाम्रो DAISY पाठ वा छवि सहितको DAISY फर्म्याट रोज्नुहोस्। तपाईंलाई उक्त फाइलहरू पढ्न सफ्टवेर वा कुनै मोबाइल एप्लिकेशनको खाँचो पर्नेछ।
BRF एउटा डिजिटल ब्रेल फाइल हो जसलाई रिफ्रेसेबल ब्रेल डिस्प्ले डिभाइस तथा अन्य सहायक प्रविधि सफ्टवेरद्वारा पढ्न सकिन्छ। तपाईंलाई सङ्कुचित वा असङ्कुचित ब्रेल चाहिन्छ भनेर तपाईंले आफ्नो खाताको रुचिहरूमा रोज्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो पुस्तकहरू पढ्न सक्ने सफ्टवेरका बारेमा थप जानकारीका लागि, यहाँ जानुहोस्: रिडिङ टूल्स